XOG: Xisbi war xasaasi ah ka soo saaray Xaaladda dalka & Muqdisho oo… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Xisbi war xasaasi ah ka soo saaray Xaaladda dalka & Muqdisho...
XOG: Xisbi war xasaasi ah ka soo saaray Xaaladda dalka & Muqdisho oo…
Muqdisho (Halqaran.com) – Xisbiga Iley ee uu hoggaamiyo Xildhibaan Cabdiqaadir Cali Cosoble ayaa war ka soo saaray xaaladda magaalada Muqdisho, banaanbaxyadii ka socday saddexdii maalin ee la soo dhaafay iyo ciriiriga ka jira waddooyinka magaalada Muqdisho.
Xisbiga Ileys ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ugu baaqay iney furto wadooyinka xiran ee magaalada oo dadweynaha ay dhib weyn ku qabaan, islamarkaana tixgeliso cabashada Shacabka Muqdisho.
Sidoo kale, warka ka soo baxay xisbiga Ilays ayaa looga dalbaday dibadbaxayaasha in aysan ku xadgubin ciidamada ammaanka, sidoo kale aysan burburin hantida shacabka.
Banaanaxyadan oo galay maalintii saddexaad ayaa saameyn ku yeeshay dhaq dhaqaaq guud ee Muqdisho.
Mana jirto weli jawaab rasmi ah oo ay dowladdu ka bixisay cabashada gaadiidleyda, marka laga reebo ballaan qaad uu sameeyey duqa Muqdisho Cumar Filish.
banaanbaxyada ka socda Muqdisho